प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल, के आयो निष्कर्ष ? - Top Nepal News
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल, के आयो निष्कर्ष ?
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बालुवाटारमा शनिबार भेटवार्ता भएको छ । सरकार विस्तार तथा जनताको दैनन्दिन समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो ।